Quinta Sentebale El Quinche - I-Airbnb
Le ndawo iyipharadesi ongalijabulela njengomndeni. Eduze kakhulu nedolobha, imizuzu engu-40 ukusuka eCumbaya. Kuzungezwe yizihlahla, i-pine, ne-eucalyptus. Ungazwa izinyoni imini yonke kanye nama-toads ebusuku. Indawo yokuthula, ukuthula nokuphumula. Njengoba uhlala emahambaneni noma udlala echibini, ubheke ama-sunset angumbukiso. Ekushiseni kwendawo yomlilo ungajabulela ukubanda kweCayambe. Sinechibi, ibhuloho lokhuni, i-grill, uhhavini wesinkwa. Samukela imindeni kuphela.
Indlu uhlobo yesihlanu, it has a yesimanje GE brand white umugqa. Ine-WiFi, i-DirecTV, ukukhanyisa kwangaphakathi nangaphandle. Indawo yokubhukuda efudumele. Sinensimu yebhola lezinyawo, inkundla yokugwedla, ne-10,000 m2 yezingadi nezihlahla zezithelo.
ubusuku obungu-7 e- Quito
Yindawo yasemaphandleni ephakathi kweQuinche neGuayllabamba. Lesihlanu sisezindaweni ezisemaphandleni. Ngenxa yendawo yayo, ikuvumela ukuba wenze ukuvakasha eduze Lake St. Paul, eJerusalema Park, Cayambe Volcano, noma Mica Reserve. Sisekude ngemizuzu engu-15 ukusuka esikhumulweni sezindiza. Futhi ungavakashela indawo engcwele yase-El Quinche.